Somaliland oo ku dhawaaqday “taatiko” ay DF ku joojineyso ficil uga imaanayay dalal dhowr ah - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Hargeysa (RBC) – Mid ka mid ah wadahadalada ay kula jirto dawlada federaalka ah ee ay ka gacangalinayso xiriirka, si looga hortago in loo helo aqoonsi
Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid ayaa sheegay in wadahadaladu si weyn u dhaawaceen qadiyada Somaliland loona baahan yahay in la joojiyo.
Guddoomiyaha oo uu soo xigtay wargayska Geeska Afrika ayaa sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadatay istiraatiijiyad ay bulshada caalamku u fasirtay wada hadallo lagu mideynayo waqooyiga iyo koonfurta.
“Waxay badaleen xaalada shaqsiyaadka ku sugan Caasimadda Muqdisho ee sheegta inay yihiin dowlada. Waxay ka dhaadhiciyeen aduunka inay wadahadal kula jiraan sidii ay u midoobi lahaayeen” ayuu yiri madaxweynaha oo intaas ku daray “ma aanan awoodin inaan soo gudbino waxyaabaha saxda ah”.
Faysal wuxuu sheegay in wada hadaladu ay horseeday in dalal doonaya inay aqoonsadaan Somaliland ay kala noqdaan aqoonsiga. Waxay horseeday in la laalo dalalkii ictiraaf raadinta ahaa, taas oo horseeday in la aqoonsado dowlad aan jirin, ”ayuu yiri. “Waa inaan joojino wadahadalka, waxaan leenahay dalkeena, waa inaan waxkeena ka iibino caalamka. “
Feysal wuxuu sheegay in Somaliland ay qaaday isla talaabadii sanadkii 2012 markii Soomaaliya ay ku biirtay Talyaaniga 1960-yadii.